नेपालमा छुट्टि मनाइरहेका गोर्खाली सेनालाई भारतले फिर्ता बोलायो – Online Nepal
नेपालमा छुट्टि मनाइरहेका गोर्खाली सेनालाई भारतले फिर्ता बोलायो
June 16, 2020 321
चीनसँग लद्धाखमा यु द्व को स्थिति बनेपछि नेपालमा छुट्टि मनाइरहेका गोर्खाली सेनालाई भारतले फिर्ता बोलाएको छ।भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नुअघि भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खालीहरू छुट्टि मनाउन घर फर्किएका थिए। तर, चीनसँग उत्तरी सीमा विवाद चुलिएपछि भारतीय सेनाले छुट्टि मनाइरहेका गोर्खालीलाई जागिरमा फर्किन आदेश दिएको हो।
भारतीय सेनामा ७० हजारको हाराहारीमा नेपालीहरू कार्यरत छन्। गोर्खा रेजिमेन्टअन्तर्गत भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरू सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएदेखि चीन र पाकिस्तानसँग जोडिएको नाकामा अत्याधिक मात्रामा कार्यरत छन्।
भारतमा नेपाली सेनाको उपस्थिति सन् १८१५ देखिको मानिन्छ, जब ब्रिटिश सत्तासँग नेपालको कुमाउमा हार भएको थियो। सन् १९४७ मा ब्रिटिश शाषकले भारतलाई सत्ता सुम्पिएर जाँदा गोर्खाली सेनाको ४ रेजिमेन्ट आफूले र भारतलाई ६ रेजिमेन्ट छोडेर गएका थिए। त्यो बेलादेखि नै नेपालीहरू भारतीय सेनामा कार्यरत छन्।
भारतीय अखबारका अनुसार दुई दिन यतादेखि बुटवलको सुनौली बोर्डरबाट गोर्खाली सेना भारत प्रवेश गर्न थालेका छन्। नेपाल–भारत बोर्डरमा उनीहरूको थर्मल स्क्यानिङ भएको छ।
हाल भारतमा गोर्खाको ७ रेजिमेन्टअन्तर्गत ३९ बटालियन छन्। सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्व हुँदा पहिलो बटालियनमा कार्यरत मेजर धनसिंह थापालाई भारतीय सेनाको उच्च सम्मान ‘परमवीर चक्र’ बाट सम्मानित गरिएको थियो।
Prevयाे के देख्नु पर्याे? १२ वर्षकी छाेरीलाई बाउले ४ पटकसम्म…।(भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextविवाह गर्न गएका बेहुलालाई मण्डपवाटै प्रहरीले समाते पछि। … कारण थाहा पाउदा सबै चकित
विक्रमको घरमा चल्यो रुवा*बासी, संसार छोड्ने यो कस्तो निर्णय ? दाजुबहिनी भ*क्का*निदै मिडियामा (हेर्नुहोस भिडियो)
३ करोड नेपाली जनताले चाहेजस्तै सरकारले दियो एकदमै खुसीको खबर
यस्ता रोग भएका व्यक्तिले नखानुहोस् सोयाबिन, नत्र हर्मोनलाई गर्दछ प्रभावित
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60458)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50257)
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना (37605)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35915)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27368)
आदित्यको विवाहमा प्रधानमन्त्री मोदीदेखि अमिताभ बच्चनसम्मलाई निम्तो, यसरी हुँदैछ विबाहको तयारी